Tsy misy manohitra anao Andriamanitra, izao tontolo izao maneran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia nanao fitsapana be dia be mba hamerana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fisainana ara-moraly. Nofeheziny fa ny fitondran-tena tsara hisorohana ny sazy no endrika farany ambany manosika hanao ny tsara. Moa ve isika manova ny fitondran-tena mba hialana amin'ny fanasaziana?
Ny tena fibebahana dia tsy hoe miala amin'ny zavatra hafa isika, fa kosa mitodika any amin'Andriamanitra, izay tia antsika ary nanolo-tena mandrakizay, miaraka amintsika ny fahafenoana, ny fifaliana ary ny fitiavana ny fiainana telo misy an'ny Ray, ny Zanaka. ary mizara ny Fanahy Masina. Ny mitodika any amin'Andriamanitra dia toy ny manokatra ny masontsika amin'ny alàlan'ny famelana ny fahazavana mba hahitantsika ny fahamarinan'ny fitiavan'Andriamanitra - fahamarinana izay efa nisy taloha, kanefa tsy hitanay izany noho ny haizin'ny saintsika.
Ny Filazantsaran’i Jaona dia milazalaza an’i Jesosy ho toy ny mazava izay mahazava ao anaty haizina, ny hazavana izay tsy takatry izao tontolo izao. Saingy rehefa mametraka ny fitokisantsika an'i Jesosy isika dia manomboka mahita azy ho zanaka malalaky ny Ray, Mpanavotra sy rahalahintsika zokiny, izay nanadiovana antsika tamin'ny ota ary nahatonga antsika hanana fifandraisana tsara. Ary rehefa tena mahita an'i Jesosy hoe iza izy, dia manomboka mahita ny tenantsika hoe iza isika - zanaka malalan'Andriamanitra.
Nilaza i Jesosy fa tonga Izy hanome antsika fitiavana sy fiainana be dia be. Ny filazantsara dia tsy fandaharana vaovao na fanovana fihetsika vaovao fotsiny. Vaovao mahafaly izany fa akaiky sy tiantsika ao am-pon'ny Ray isika, ary i Jesoa Kristy dia porofon'ny velona amin'ny ezaka tsy misy fiaretana hitaona antsika ho amin'ny fifalian'ny fitiavana mandrakizay izay nananany niaraka tamin'i Jesoa Kristy Zanany sy tamin'ny Saint Misara-tsaina. Na iza na iza ianao, dia Andriamanitra ho anao, fa tsy manohitra anao. Avelao izy hanokatra ny masonao amin'ny fitiavany.